Home » Akụkọ Njem Nleta » Russia nwalere ụgbọelu buru ibu nke mbụ Russia na-esote Soviet Russia
Achọpụtara ụzọ ule n'ihi oke iru mmiri na ọnọdụ okpomọkụ dị ebe ahụ, nke na-eduga n'ichebe ice n'elu ihu ụgbọ elu
Emere ule ugbo elu na ọnọdụ oyi
Craftgbọ elu mere ụgbọ elu 14 gafee ụsọ Oké Osimiri White, akụkụ nke Oké Osimiri Barents na mpaghara Subpolar Urals
Irkut na-efe nke ọma MC-21 maka ihe karịrị afọ atọ
Ndị ọrụ ụgbọelu na-ahụ maka ụgbọelu na-ahụ maka ụgbọelu Russia emeela ule ụgbọ elu mbụ nke Russia, ndị ụgbọelu ndị Russia na-ebu ụzọ, bụ MC-21-300.
Emere ule ahụ n'ọnọdụ ọnọdụ oyi iji hụ otu ụgbọ elu si arụ ọrụ mgbe akpụrụ mmiri. Aircraftgbọ elu ahụ rụzuru ule asambodo nke ọma n'okpuru ọnọdụ icing okike na mpaghara ugwu Russia ma nwee ike ofufe na ọnọdụ siri ike, onye mepụtara ya Klọ ọrụ Irkut, akụkụ nke United Aircraft Corporation (UAC), ekpughere na mbido izu a.
Aircraftgbọ elu ahụ mere ihe dị ka ụgbọ elu iri anọ na anọ site na elekere atọ ruo ise na ụsọ Oké Osimiri White, akụkụ nke Barents Sea na Subpolar Urals. A họpụtara ụzọ ndị ahụ kpọmkwem n'ihi oke iru mmiri na ọnọdụ okpomọkụ dị ala ebe ahụ, nke na-eduga na nhazi ice na mbara igwe.
E duziri ụgbọ elu asambodo n'ọtụtụ usoro. Nke mbu, ndi oru ugbo choro igwe ojii nke gha eme ka onodu a choro. Ngwá ọrụ pụrụ iche arụnyere na ụgbọ elu ahụ, gụnyere igwefoto 12, nyeziri ha ohere ịchịkwa ókè mbara igwe ahụ kpuchiri na ice wee dekọọ otu ọ si arụ ọrụ. Mgbe akwa ice ahụ tochara, ụgbọ elu ahụ nwetara elu iji lelee arụmọrụ ya n'okpuru ọnọdụ ndị ahụ.
A na-eme ka ọkpụrụkpụ ice dị na ule ọ bụla na-agba ọsọ, n'ikpeazụ rute centimita asatọ - karịa nke ukwuu iji kwuo na ụgbọ elu ahụ gafere ule ahụ nke ọma. Dịka ụkpụrụ Russia na European si kwuo, ụgbọ elu ekwesịghị ịlafu njirimara e mere ya mgbe ọ na-ekpuchi oyi nke 7.6 cm (sentimita 3).
Mgbe emechara asambodo asambodo ahụ, MC-21-300 si Arkhangelsk laghachi na ọdụ ụgbọ elu Zhukovsky dị nso na Moscow.
Irkut anọwo na-efe efe MC-21 nke ọma kemgbe ihe karịrị afọ atọ, mana enweghị ike ịnweta akụkụ ndị US mere maka ụgbọ elu ahụ mere ka ụlọ ọrụ ahụ chee echiche ụzọ iji gbalịa ịzụlite ụgbọ elu ahụ site na iji ọtụtụ ihe ndị dị n'ụlọ. Ihe dị iche iche nke MC-21, nke a maara dị ka ụgbọ elu MC-21-310, nke nwere injin PD-14 Russia abụọ mere ụgbọ elu ya na njedebe nke afọ gara aga.
Ottawa na-eme njem nlegharị anya Ottawa
Akpụkpọ ụkwụ Sandals na ASTA na-ekpughe usoro njem dị mkpa tupu oge ọkọchị
Kọmịshọn European na-agba mba EU ume ka ha mepee ndị njem si mba ọzọ